Elk Summit 32-Acre Mountain Retreat-imibono etshayelayo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguErin Melissa
Iihektare ezingama-32 zeparadesi ekufutshane nehlathi leSizwe leManti La Sal. Ipropathi yakhelwe kwindlela yokunyuka intaba kunye ne-ATV enemibono etshayelayo yeentaba kunye nehlathi. Imizuzu eli-15 yokuqhuba ukusuka kwiSikhululo seNkonzo yeHlathi yase-US enemephu, izikhokelo, kunye nolunye ulwazi lokufikelela kulo lonke uhambo oluya kule ndawo intle yase-Utah. Iibhedi ezi-3, izindlu zokuhlambela ezi-2 ezigcweleyo zilala ngokukhululekileyo ziyi-6 kunye nebhedi enkulu yaseKumkani + iibhedi ezingamawele ezi-4. Ikhitshi kunye nebhafu enkulu ihlaziywe ngokupheleleyo, zonke izixhobo ezitsha + iwasha / isomisi
Indlu enoxolo kwindawo ezolileyo ilungele iintsapho okanye amaqela anabantu abayi-6. Izihlalo zetafile yekhitshi 6, ikhitshi epheleleyo enezixhobo zangoku, indawo yokugcina eninzi. Idyasi entsha yepeyinti kuyo yonke indlu. Iibhedi ezitofotofo, igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa elineshawa enkulu yangoku. Indawo yomlilo yangaphandle enejingi ejonge iimbono ezimangalisayo. Ipatio esecaleni enetafile/izitulo. Iyadi enkulu kakhulu enendawo yokubaleka izinja, indawo yokupaka eyaneleyo. Indawo egqibeleleyo yohambo lwangaphandle enokufikelela kwiindlela zokuhamba intaba kunye ne-ATV-ing. Iindledlana zokuhamba ngaphandle komnyango wangaphambili. Ukujongwa okuhle kwezilwanyana zasendle kunye neeTurkeys, amaxhama kunye nee-elk zihlala ziwela ipropathi! Isibhakabhaka esihle ebusuku ukubona iinkwenkwezi!
Le yindawo ezolileyo ngokugqithisileyo engekho kufutshane nazo naziphi na iindlela ezinkulu okanye oohola bendlela. Akukho ngxolo yendlela. Uya kunandipha uxolo oluzolileyo nenzolo njengoko ubukele ilanga litshona phezu kweentaba. Izinja zinokudlala kwindawo enkulu, okanye kukho inja ekhokelela ekuzikhuseleni xa zifunwa. Iindawo zokuhlala zangaphandle ezinendawo yomlilo kunye nemibono emangalisayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Erin Melissa
UErin Melissa yi-Superhost